Intshebe yezinsuku ezintathu | Amadoda aSitayela
Kuthathwe ngokusobala. Sivele sinezaba zokungakushebi lokho izinhlanga ungakanani umonakalo owadala kudala.
Kuyinto ekhanga kakhulu, futhi ibuye ibe ntofontofo kakhulu. Ngezaba zokuthi lolu hlobo lwentshebe luyingxenye yokubukeka kwakho, ungakhohlwa mayelana nentshebe isonto lonke.
Ukulungisa intshebe yakho futhi khulisa intshebe yezinsuku ezintathu epheleleUngazisiza ngesikele noma ngesiqeshana sezinwele. Uma uyenza ngesikele kusebenza kanzima kunokusebenzisa i-blade, futhi uma ukhetha okokuqhafaza izinwele, ubude obuzokhethwa lapho ugunda intshebe yakho bunqunyelwe.
Lokhu kubukeka scruffy, akanankinga, ne- "badass" encane, iyanqoba namuhla. "U-El Duque", "uLucas" waseHombres de Paco uyabahlanyisa futhi masingakhohlwa abagqugquzeli balokhu kubukeka, njengokuhlala njalo uDavid Beckham noma uPatrick Dempsey phakathi kwabanye.
Kepha masingakuthathi njengomthetho intshebe idinga ukunakekelwa Futhi uma ungazomnika, kungcono ungathathi, ngoba cha, akubukeki kahle!
Amathiphu wentshebe yezinsuku ezintathu ephelele
Mnakekele, usike kahle futhi ungayivumeli ikhule ingenangqondo.
Dlulela kuyo ngesikele Noma zithengele ikhithi yokushefa efanele.
Futhi ekugcineni, intshebe akuyona yonke into, kufanele uyihlanganise nokusika izinwele okuhle akunankinga noma kugundiwe.
Ungalokotha? Kufanele ngikhulume iqiniso, akubukeki kahle kimi, kodwa ngingathanda ukukwenza.
Isithombe: Jason Merritt / Getty Images
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Ukunakekelwa komuntu siqu » Kugundiwe » Izinhlanga
Ayanda amadoda agqoka iphenti eYurophu naseMelika
Isigqoko seFedora: samadoda amahle nenhle